Liverpool Oo Anfield Ku Dubatay Bournemouth +SAWIRRO | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Liverpool Oo Anfield Ku Dubatay Bournemouth +SAWIRRO
Liverpool ayaa Anfield ku garaacday kooxda Bournemouth iyada oo Sadio Mane, Mohamed Salah iyo Roberto Firmino ay markale noqdeen labada xidig ee kulankan go’aamiyay. Sadio Mane ayaa qaybtii hore ee kulankan dhaliyay goolka ay Reds hogaanka ciyaarta ku haysay waqti dheer laakiin Mohamed Salah ayaa kooxdiisa u saxiixay goolka labaad ee ay kalsoonida buuxda ku heshay halka Firmino uu ciyaarta goolka saddexaad ku soo xidhay.
Liverpool ayaa talaabo wayn sare ugu qaaday in ay u soo baxdo heerka Groupyada UEFA Champions League waxayna hadda u baahan tahay lix dhibcood afarta kulan ee xili ciyaareedkan uga hadhsan waxayna kooxda Klopp u muuqataa mid aad ugu sii dhawaanaysa in ay rajadii Chelsea sii burburiso.
Mohamed Salah ayaa rekoodho taariikh ah kulankan ka sameeyay waxaana ka mid ah in uu noqday xidigii taariikhda Premier league 22 kulan hal xili ciyaareedkan goolal ka dhaliyay halka uu sidoo kale noqday xidigii qaarada Afrika ka soo jeeda ee hal xili ciyaareed 30 gool oo Premier league ah dhaliyay.
Liverpool ayaa kadib farxadii waynayd ee ay ka soo heshay Etihad Stadium iyo u soo bixitaankii afar dhamaadka UEFA Champions League waxay dib ugu soo laabtay kulamada Premier League iyada oo Anfield ku soo dhawaysay kooxda Bournemouth.
Liverpool oo aan xili ciyaareedkan wax guuldaro ah kula kulmin garoonkeeda Anfield ayaa kulankan ciyaaraysay iyada oo maanka ku haysay in Chelsea ay guul wayn ka sii gaadhay Southampton isla markaana ay markeeda u baahnayd guul ay taas kaga sii fogaato.
DAQIIQADII 7 AAD Sadio Mane ayaa goolka furitanka markiiba kooxdiisa Liverpool u saxiixay isaga oo markii hore darbo madax xoogan ku bartilmaameedsaday goolka Bournemouth laakiin goolhaye Begovic ayaa kubbada dirqi ku joojiyay basle Mane ayaa noqday ciyaartoyga ugu deg dega badnaaday wuxuuan goolkan ku dhaliyay kubbada oo Begovic iska soo joojiyay wuxuuna ciyaarta ka dhigay 1-0 ay Liverpool hogaanka ciyaarta kula wareegtay.
Sadio Mane ayaa la wareegay rekoodhka gool dhalinta abid ee ciyaartoyda dalkiisa Senegal ee goolashii ay Premier league ka soo dhaliyeen wuxuuna ahaa goolkiisii 44 aad ee uu Premier League ka dhaliyay.
Liverpool ayaa qaybtii hore ee ciyaarta si buuxda awooda u lahayd inkasta oo Bournemouth ay samaysay difaacasho xoogan si ay Reds uga horjoogsato in ay goolal kale la timaado iyada oo Firmino, Salah iyo Mane ay markale dhibaato badan ku abuurayeen difaaca Bournemouth.
Qaybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 1-0 ay Liverpool guul ugu taagnayd iyada oo aan wax dhibaato ah kala kulmin Bournemouth oo si xoogan awooda u saaraysay in aan goolal kale laga dhalin laakiin Reds ayaa u muuqatay kuwo aan dardartii ugu xoonayd ku ciyaarin qaybtii hore.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii labaad ee ciyaarta ayay Liverpool doonaysay in ay ciyaarta ku disho goolka labaad lakaiin Bournemouth ayaa waqti badan Reds u diidanayd in ay goolka labaad keensato balse waxay kooxda Klopp bilawday in ay si xoogan u shaqayso.
DAQIIQADII 66 AAD Liverpool ayaa ku dooday in ay rekoodhe cadaan ah heshay isla markaana uu Ake mutaysto kaadhka labaad ee digniinta ah oo caasaan loo raaco kadib markii uu Mohamed Salah dhulka ku jiray isaga oo goolka labaad in uu dhaliyo doonayay laakiin garsooraha ayaan waxba tilmaamin.
DAQIIQADII 69 AAD Mohamed Salah ayaa si cajiib ah markiiba u dhaliyay goolka labaad uu garsooraha ka doonayay in uu rekoodhe ku dhalin karayay laakiin markan Salah ayaa goolkan ku dhaliyay kubbad uu meel fog oo ildheeri ah ka soo tuuray dar’yarka cid kasta ka yaabsanaya ee Alexander-Arnold isaga oo Salah ciyaarta ka dhigay 2-0 ay Reds goolka labaad ee kalsoonida ku eshay.
Goolkan ayaa ahaa goolkii 40 aad ee uu Mohamed Salah xili ciyaareedkan u dhaliyay Liverpool ee tartamada oo dhan wuxuuna sidoo kale ahaa goolkiisii 30 aad ee Premier League isaga oo noqday xidigii abid ugu horeeyay ee qaarada Afrika ka soo jeeda ee hal xili ciyaareed 30 gool ka dhaliyay Premier league.
Mohamed Salah ayaa sidoo kale rekoodh taariikhi ah ka dhigay horyaalka Premier league isaga oo noqday ciyaartoygii abid ugu horeeyay ee 22 kulan oo Premier league ah oo hal xili ciyaareed wada ah si joogto ah goolal uga dhaliyay.
DAQIIQADII 82 AAD Bournemouth ayaa heshay fursadeedii ciyaarta ugu fiicnayd kadib markii uu Gosling uu is arkay isaga oo 10 yards oo kaliya u jira goolka Liverpool wuxuuna u baahnaa kaliya in uu garaaco goolhaye Karius balse goolhayaha ree Germany ayaa badbaadin cajiib ah sameeyay.
DAQIIQADII 90 AAD Roberto Firmino ayaa markiisa dhaliyay goolka saddexaad ee ay Liverpool ciyaarta ku soo xidhay isaga oo si degan u dhamaystiray kubbad caawin uu ka helay Oxlade-Chamberlain oo isna habeen wayn ku qaatay Anfield waxayna ciyaartu noqotay 3-0 ay Reds ku dubanayso Bournemouth.
Ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay 3-0 ay Liverpool ku garaacday kooxda martida u ahayd ee Bournemouth iyada oo Reds hadda 6 dhibcood uga baahan 4 ta kulan ee xili ciyaareedkan uga hadhay iyada oo 3 dhibcood sare uga sii baxday Tottenham oo Man City la ciyaaraysa halka ay 10 dhibcood ka sare martay Chelsea.